Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana 2018: Iza no olona tian’Antananarivo?
Fifidianana 2018: Iza no olona tian’Antananarivo?
Hatramin’izao aloha dia mbola misitery ny fifidianana amin’ny taona 2018 izay hahafantarana indray ny filoham-pirenena ho avy eo. Matetika dia misy fahagagana hatrany mipoitra avy eto Antananarivo renivohitra hatramin’izay raha ny tantaran’ny fifidianana filoham-pirenena ity no asian-teny. Matetika dia amin’ny fotoana farany no mipoitra izany olona izany ka andehanan’ny safidin’ny vahoaka indray. Somary manahirana ny olona sasany ny oha-pitenena hoe “Antananarivo no Madagasikara”, nefa raha mandinika amin’ny fijery mazava sy tsy mitanila isika dia misy fahamarinany be dia be izany. Raha mijery ny tarehimarika eny amin’ny CENI ( Vaomieram-pirenena mahaleo tena momba ny fifidianana), dia Antananarivo no be mponina ary be mpifidy indrindra. Ny faritra Analamanga fotsiny no mitovy amin’ny isan’ny mpifidy ao amin’ny faritanin’i Fianarantsoa sy Antsiranana mitambatra. Ny ato amin’ny faritanin’Antananarivo indray dia mitovy amin’ny mpifidy ao anatin’ny faritanin’i Fianarantsoa sy Toamasina ary Antsiranana mitambatra. Mazava ho azy izany fa izay lany ato amin’ny faritan’Antananarivo ka mahazo vato be indrindra no ho olona mety ho filoham-pirenena indray manomboka amin’ny taona 2018 izao.
Eo anatrehan’izany dia mandeha dia mandeha ny resaka fa ingahy Hery Rajaonarimampianina sy Ravalomanana Marc ary Andry Nirina Rajoelina no alahatra ny olona amin’izao fotoana izao. Raha mijery sy manaraka ny tantara nefa isika dia marina izany amin’izao fotoana izao saingy mbola tsy fantatra avokoa izay olona hifaninana eo ary hisarika olona amin’ny fotoana farany toa ny nisy hatramin’izay. Araka ny nambara taty aloha dia misy fahagagana hatrany nipetraka teo Madagasikara amin’ny fifidianana filoham-pirenena toa izao amin’ny ora farany.
Tamin’ny andron’ingahy Ratsiraka Didier ny taona 2001, dia mbola nanantena mafy ny antoko Arema fa ho azon’ity antoko ity mora foana ny fifidianana 2001, nefa nipoitra tampoka ingahy Ravalomanana Marc dia niova ny raharaha rehetra. Na ara-dalàna na tsy ara-dalàna iny fifidianana iny dia nisy fiovana nipoitra ary mafy dia mafy teto amin’ny firenena ny fisehon’izany. Tamin’ny andron’ingahy Tsiranana Philibert koa dia mitovitovy amin’izany ny sary ny taona 1970 satria naongan’ny olona izy ny taona 1972. Ingahy Ravalomanana Marc Koa dia mbola nanantena ny “mandat” fahatelo nefa tapaka izany raha mbola roa taona monja ny fe-potoana faharoa nitondrany tamin’ny taona 2008-2009, ka nolanian’ny olona ny taona 2007 izy.
Isan’ny filoha tiam-bahoaka teto Antananarivo ingahy Ratsiraka Didier ny taona 1976, i Zafy Albert ny taona 1993, Ravalomanana Marc ny taona 2001, nefa dia novadihany tao anatin’ny ora farany ka tsy lany intsony.
Iza indray izany no olona hofidian’Antananarivo amin’ny taona 2018 izao? Izay tian’Antananarivo ihany no hahazo vato be indrindra eo ka azo inoana fa hitondra ny firenena. Ny fotoana farany matetika no mipoitra io olona io ka ho hitantsika ihany raha toa ka mbola mitombina ny fomba sy ny fisainana nisy hatramin’izay.